Qorigii Gaalkacyo qalin-baa baddelay! | KEYDMEDIA ONLINE
GAALKACYO, Soomaaliya – Sanado badan ayay Gaalkacyo ku hoos nooleyd xasarado xudduntoodu ka soo billaabaneyso 1884-kii iyo tagistii Habyo ee Keenadiid, oo laga dhaxlay kadeed karaara dhaafay, hayeeshee, ugu danbeyn waxa ay maanta u muuqataa in miyirku taliyay oo maskax-fayow ka shaqeysay nabad waarta, is dhex-gal bulsho iyo dhab-u-heshiin dhaxal wanaagsan dhali karta.
Inta badan waxgaradka Soomaalida ayaa rumeysan in xasaraadaha Soomaaliya ay dagi la’dahay muddada dheer ay ka soo unkumaan mushkiladda Mudug ka aloosan, taasise waxay noqon kartaa malo maanta soo af-jaranta, maadaamaa bulshada Gaalkacyo doorteen jidka nabadda, hormarka iyo wax wada-qabsiga.
Todobaadkaan, waxaa xarunta gobolka Mudug lagu qabtay munaasabadda Bandhig buugeedka Nabadda Gaalkacyo 2021, oo ay soo agaasimeen dhallinyaro ku bahoobay (Madasha Dhallinyarada Nabadda iyo Isdhexgalka Gobolka Mudug) oo garab ka helayay hey’adaha PDRC & Interpeace.
Madax ka kala tirsan labada maamul ee ka jira Gobolka, [Galmudug & Puntland] iyo wufuud heer sare ah oo dal iyo dibadba ka kala timid ayaa ka qeybgashay munaasabadaas, waxaana si weyn loo maamuusay nabadda iyo is-dhexgalka taaba-gashay sanadihii na-weydaartay.
Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa aaladda fogaan aragga ee ZOOM-ka kaga qeyb qaatay munaasabadda, wuxuu si weyn ugu mahad celiyay dadkii soo abaabulay bandhiggan, Peace Book Fair iyo aqoon yahankii Soomaaliyeed ee ka soo qeyb galay.
RW Rooble, wuxuu shacabka Mudug, ku boorriyay in ay ka sii shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada, iskuna kaashadaan la dagaallanka cadowgooda 1-aad ee Al-Shabaab, wuxuu si mug leh u taageeray in qalinku ka adkaado qoriga sidoo kalana Nabadu ka adkaato colaadda.
Gaalkacyo oo hore ugu suntaneed xarun xasarad iyo xiisad miiran ah, waxa ay sanadkaan isku diyaarineysa martigalinta doorashada qaar ka mid ah kuraasta Xildhibaannada Golaha Shacabka BFS, dhanka Galmudug, taas oo muujineysa muhiimadda nabadda iyo ka shaqeynta amnigu u leeyihiin degaanka iyo dadka ku nool intaba.
Shalay, waxaa magaalada gaaray, xubno ka tirsan Guddiyada Doorashooyinka heer Federaal (FEIT) iyo Heer Dowlad goboleed Galmudug (SEIT), kuwaas oo u jeedkoodu yahay dardargelinta iyo diyaarinta goobaha lagu qabanayo doorashada. Gaalkacyo waa magaalada labaad ee loo asteeyay martigalita doorashada, kadib xarunta maamulka ee Dhuusamareeb.
Heshiiskii nabadda ee sanadkii 2017 la saxiixay, ama sida loo yaqaanba [Heshiiskii Xabbad joojinta Gaalkacyo] wuxuu horseeday in la aas-aaso boolis wadajir, [isku-dhaf], oo ka kooban ciidamo labada maamul ah, si ay u ilaaliyaan hesiiskii xabbad-joojinta ee la gaaray iyagoo xaqiijinaya sarreynta sharciga kana shaqeynaya nabad-dhisidda.
Hoggaamiyayaasha Afartii sano ee la soo dhaafay, xubnaha bulshada iyo saraakiisha booliska Waqooyiga iyo Koofurta Gaalkacyo, waxa ay ku suntan yihiin adeegayaal howshii ay qabteen la mahadiyay, kuwaas oo sabab u noqday in colaaddii qarniga ka badan taagneyd maanta logu badelo caano-wada-dhamid bulsho.